Umyalo womlando ngezinsuku zokukhishwa komyalo ngamunye | Kusuka kuLinux
Umyalo we-history usikhombisa ku-terminal imiyalo esiyenze esikhathini esedlule, into enjengale:
Kuze kube manje kuhle kakhulu, kepha kuthiwani uma sifuna ukwazi kahle ukuthi senza nini umyalo ngamunye esikhathini esedlule? O_O
Ngisho, bheka into enjengale:
Ukuze senze lokhu, kufanele sibeke lo myalo ku-terminal:
Bese begijima futhi umlando bese ubona umphumela 🙂
Manje lokhu esikwenzile ngeke kube unomphela, okusho ukuthi, lapho sivala iseshini (noma sicisha ikhompyutha) le ndlela epholile yokubona ukukhishwa komyalo we-history izokhohlakala uhlelo, ukuze ikwenze unomphela kumele sebenzisa okulandelayo:
Okusho ukuthi, beka lowo myalo ekugcineni kwefayela lethu .bashrc lokho kufihlwe ekhaya lethu.
Ngendlela, kulabo abazibuza ukuthi i-% F ne-% T isho ukuthini…% F isho usuku olukumodi yenyanga yenyanga yonyaka, kuyilapho i-% T isikhathi esikwimodi yemizuzwana yehora (amahora angama-24 ).
Hhayi-ke angicabangi ukuthi kukhona okunye ongakusho, okuthunyelwe okufishane kepha ngicabanga ukuthi ichopho liyathandeka ^ - ^
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Umyalo womlando ngezinsuku zokwenza komyalo ngamunye
Uhlobo lwekhophi lokunamathisela esigungwini.
i-echo "ukuthekelisa HISTTIMEFORMAT = '% F% T:'" >> ~ / .bashrc; umthombo ~ / .bashrc
Uff ungazami lokho, izingcaphuno ze-wordpress azisebenzi ku-terminal.
Faka ikhodi phakathi (kwekhodi) …… (/ ikhodi)… KODWA, ukuguqula ama-parentheses abe ngaphansi kwezimpawu ezinkulu kunezingaphezulu
Siyabonga ngemininingwane ye-KZKG ^ Gaara kepha kunemininingwane:
Usuku luhlala lusuku lwanamuhla, hhayi usuku lapho umyalo wawuqhutshwa khona.
Noma okungenani lokho kuphume ekuhlolweni kwami. Jabulela
Kubukeka sengathi kusebenza kahle kuphela ngemiyalo eyenziwe ngemuva kokuthunyelwa kwamanye amazwe, okungukuthi, kusasa uzobona ukuthi imiyalo oyikhipha kusasa izolunga, nokunye njll njengoba izinsuku zihamba.
Ngiyabonga ngamazwana 😀
Ahh uyahamba. Ngiyaqonda
Siyabonga ngempendulo bese uyigcina ku-.bashrc.
Akunjalo, ngiyabonga ngokuphawula kwakho 🙂
Lowo ngumbono 😀
Kuhle!, Elula futhi ephumelelayo. Ngiyabonga.
Ithiphu enhle kakhulu!, Izinsuku eziningi zalezi 🙂
Phendula ku-pEpE (@valdezpepe)
Umnikelo omuhle kakhulu, usebenza kahle, ngiyabonga.
Imininingwane ethakazelisayo !! Ekuqaleni bengicabanga ukuthi ayisebenzi, ngoba imiyalo yangaphambilini ibivele ngosuku olufanayo; kodwa lezo ayezethula, lezo uma ekhombisa isikhathi esifanele.
Ithiphu enhle kakhulu, kuphela ukuthi ngibe nenkinga yokunikeza imiyalo njengoba ukhombisa ukuthekelisa HISTTIMEFORMAT = '% F% T:' bese umlando ... uma ungithumela usuku nesikhathi sayo yonke imiyalo ,, into exakayo ukuthi Ithumela kuyo yonke imiyalo engithumela usuku nesikhathi ikhompyutha inayo ngaleso sikhathi, okungukuthi, ayingikhombisi usuku nesikhathi sangempela semiyalo ,,,, ngithola imiyalo engiyikhiphe izolo kodwa ingithumela usuku lwamanje lwekhompyutha…. Ngakho-ke ayisebenzi kimi ngoba angiluboni usuku lwangempela.
Ngingazigcina kanjani izinsuku zangempela ???
Akusebenzi, kuthatha usuku lwamanje lohlelo hhayi usuku lokukhishwa komyalo
Uma uyifometha ukuze ubeke usuku kuyo, imiyalo oyenzile NGAPHAMBI kwalokhu ngeke ibe nosuku olufanele, kepha labo obenza ngemuva kwalokho bazoba.
Umbuzo we-KZKG ^ Gaara.
Ungakhombisa nabasebenzisi abenze imiyalo?
UJohn James kusho
Umlando ucacele umsebenzisi ngamunye, ngakho-ke kuzofanele ufake iseshini yomsebenzisi ngamunye ukuze uqinisekise okudingayo, manje uma ufuna okuthile okunokulawulwa okukhulu ngincoma ukusetshenziswa kweSUDO, ngoba lokho uma kushiya irekhodi lakho konke okwenziwe kumsebenzisi ngamunye onamadethi nabanye.
Phendula uJohn James
Kuhle kakhulu, ngiyabonga ngegalelo kube usizo olukhulu.
Ngidinga ukwenza umbhalo othumela umlando kimi futhi uwenze nge-bash awuthathi.
I-KDE 4.11.1 iyatholakala